Bar Ninkaaga qodobadaan muhiimkaa si uu raaxo kuugu qanciyo GALMADA | shumis.net
Home » galmada » Bar Ninkaaga qodobadaan muhiimkaa si uu raaxo kuugu qanciyo GALMADA
Bar Ninkaaga qodobadaan muhiimkaa si uu raaxo kuugu qanciyo GALMADA
Bani’aadamku waxa uu markasta u baahan yahay in uu wax ka barto si uu horumar uga gaaro arimo badan oo khuseeya noloshiisa.
Marka ay tahay xidhiidhka ka dhexeeya lamaanahya ayaa waxa uu u baahan yahay in markasta hore loo mariyo.
In uu xidhiidhkaasi ahaado mid xiiso badan leh oo jacaylka ka dhexeeya lamaanaha ka dhiga mid waara. Lamaanaha kor u qaada aqoontooda ku saabsan sida ay ugu raaxayn lahaayeen ayaa ah kuwo jacayl iyo farxad badan ku nool. Waxa uu mid waliba dareemaa sida uu ka kale ugu qanacsan yahay.
Raaxada galmada kadib ah
Si kasta oo aad u daasheen ayaa waxa muhiim ah galmada ka dib in aad ahaataan kuwa isu sii raaxaynaya.
Cilmi baadhis la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in raga qaar hurdo qabato galmada ka dib. Hadaba xaaji si aanad u seexan markasta oo aad xaajiyada sariirta isla aadaan waa in aad kula la raaxaysataa xaaska xiliyo kale duwan.
Title: Bar Ninkaaga qodobadaan muhiimkaa si uu raaxo kuugu qanciyo GALMADA